Lixesha lokuTshintsha amaQhinga okuThengisa nge-imeyile xa ... | Martech Zone
Ii-imeyile zakho zijongeka ngoluhlobo:
Mhlawumbi umgca wesifundo unyanzelisa kwaye wenze ubuqu endaweni ye "Guqula oku: Imba yama-46"
Mhlawumbi ukophuka kwemigca ukuze ndingasongeli njengoko bendifunda (khange ndiyifunde, bekungenakwenzeka).
Mhlawumbi ii-imeyile ezininzi ze-MIME zokuthumela umbhalo kwabo bafuna ukubonakala, kodwa i-HTML kwabo bethu bonwabela i-imeyile eyilwe kakuhle.
Mhlawumbi intshayelelo enyanzelisayo?
Mhlawumbi indawo emhlophe phakathi kwezihloko ukwenza ukuba kube lula ukuskena?
Mhlawumbi izihloko ukuqaqambisa izihloko ezahlukeneyo kwaye uzahlule kwiinkcazo?
Mhlawumbi uluhlu oluneebhulethi ezinamakhonkco kunye nolwazi olunxulumene nolunye?
Mhlawumbi uluhlu lweekhonkco eziqhelekileyo ezibuyela kwiwebhu?
Mhlawumbi eyahlukileyo Umboneleli ngeNkonzo ye-imeyile ukuba eyakho kunzima ukuyisebenzisa?
Inxalenye eyoyikekayo apha yile Guqula okuumgca ngu:
UtshintshoOku kukudala uhlobo olutsha lweendaba. Uhlobo lweendaba olusebenzisa izixhobo esele zikho (ezinje ngeePDF, iibhlog kunye newebhu) ukucela umngeni kwindlela ezenziwa ngayo nokusasazeka kwezimvo.
Umbutho omkhulu onesixa esikhulu semathiriyeli ukukhuthaza utshintsho kwiinkokeli kunye noosomashishini. Kubi kakhulu ukuba bakhethe ukungayinaki indlela yonxibelelwano enye endigcina ndibuyela kwiwebhusayithi yabo.
5 / 8 / 2008: Nangona ndibhalisile, ndiyifumene le imeyile namhlanje. Andiqinisekanga ngento enokwenzeka kodwa luphuculo olukhulu:
tags: uluhlu oluneebhulethitshintsha okuamakhonkco aqhelekileyoemailukufomatha i-imeyilezihlokoisingenisoukwaphulwa kwemigcaamakhonkcoMimeinxalenye emininzi mimenewsletterumgca wokufundaindawo emhlophe
Amagqibela kankqoyi we-Cisco I-Prize!
Meyi 8, 2008 kwi-9: 17 AM
Mhlawumbi uyibethe entloko kanye. Iposti elungileyo kunye neengcebiso ezinkulu.
Meyi 8, 2008 kwi-10: 30 AM
Meyi 9, 2008 kwi-10: 17 PM
Eyona nto ndiyithandayo kuxa umxhasi ekhusela "i-Issue46" yakhe kumgca wesifundo kwaye banenombolo yomcimbi ngamnye kumgca wesifundo. Ngenene ndeva omnye esithi, "Kusenzelwa ukuba ababhalisile bethu baququzelele ii-imeyile ezigcinwe kuvimba wabo we-imeyile."
Ingaba uyadlala ngam? Undibhatala iimali ezinkulu ukuze ndikuxelele ukuba ungavula njani kwaye ucofe amaxabiso kodwa awuzimiselanga kugungqa kumgca wesifundo? Ithamsanqa kwezo metrics… ..